WinRaR | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label WinRaR. Show all posts
WinRAR 5.21 Beta 1 Datecode 25.01.2015 (x86/x64)
WinRAR 5.21 Beta 1 Datecode 25.01.2015 (x86/x64) | 3.74 MB
Features of WinRAR: – Using WinRAR puts you ahead of the crowd when it comes to compression by consistently making smaller archives than the competition, saving disk space and transmission costs. – WinRAR provides complete support for RAR and ZIP archives and is able to unpack CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z archives. – WinRAR offersagraphic interactive interface utilizing mouse and menus as well as the command line interface. – WinRAR is easier to use than many other archivers with the inclusion ofaspecial “Wizard” mode which allows instant access to the basic archiving functions throughasimple question and answer procedure. This avoids confusion in the early stages of use. – WinRAR offers you the benefit of industry strength archive encryption using AES (Advanced Encryption Standard) withakey of 128 bits. – WinRAR supports files and archives up to 8,589 billion gigabytes in size. The number of archived files is, for all practical purposes, unlimited. – WinRAR offers the ability to create selfextracting and multivolume archives. Recovery record and recovery volumes allow to reconstruct even physically damaged archives. – WinRAR features are constantly being developed to keep WinRAR ahead of the pack.
OS : Windows XP / Vista /7/8 (x64x86)
Languages : English – Germany – French
Extra : Winrar Themes
ကဏ္ဍ compressor, WinRaR
Rar Password များကို ဖော်ထုတ်ပေးမယ့် - RAR Password Recovery Magic v6.1.1.393 + Serial Key
အခုတင်ပေး လိုက်တဲ့ Software လေးကတော့ RAR Password Recovery Magic ဆိုတဲ့ Software လေး
တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အခု Software လေးကိုလည်း တွေ့တုန်းလေးဒေါင်းယူထားစေချင် ပါတယ်ဗျာ။
ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ တင်တဲ့ သူနည်းလို့ပါ။ Rar တစ်ခုထဲကိုပဲ Password ရှာပေးနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး ZIP
and RAR and/ PKZip / WinZip, RAR / WinRAR အားလုံးရဲ့ Password များကို Recovery လုပ်ပေး နိုင်ပါ
တယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ File တွေကို Rar နဲ့ချုံ့ပြီးရင် Password ပါပေးထား တက်ကြပါ
တယ်ဗျာ။ ပေးထားတဲ့ Password မေ့သွား ခဲ့ရင် ဒီကောင်လေး က ပြန်ပြီး ရယူပေးနိုင်မှာဖြစ် ပါတယ်ဗျာ။
နောက်ပြီး Internet ကနေ မိမိလိုချင်တဲ့ Software တွေကိုဒေါင်း ယူပြီးတဲ့ အခါမှာ အချို့ Rar ဖိုင်နဲ့တင်ပြီး Password ပေးထားတက်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ အခါမှာလည်း အခု တင်ပေး ထားတဲ့ RAR Password Recovery
Magic ကိုအသုံးပြုပြီး Rar ရဲ့ Password ကိုပြန်လည် ရယူနိုင်မှာဖြစ် ပါတယ်ဗျာ။
Window 2000/XP/2003/vista/7 အစရှိတဲ့ OS အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ် ပါတယ်ဗျာ။ အသေး စိတ်
ကိုတော့ အောက်မှာဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Full Version အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Serial
* DisConnect Internet
* Register the application with Serial Key
ကဏ္ဍ Password, Recover, WinRaR
RAR Password Recovery Magic 6.1.1.393 | 1.74 MB
Home page : http://www.password-recovery-magic.com/
WinRAR 5.20 Beta4DC 20.11.2014 + Germany / French DC 17.11.2014
WinRAR 5.20 Beta4DC 20.11.2014 + Germany / French DC 17.11.2014 | 37.70 MB
▼ tusfiles ▼ OR ▼ shared ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, November 22, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ compressor, Window, WinRaR
WinRAR 5.20 Beta4(x86/x64)
WinRAR 5.20 Beta4(x86/x64) | 3.53 MB
a) WinRAR 5.10 did not set “hidden”, “read-only” and “system”
c) ZIP archive created with “Do not store paths” option
ကွန်ပျူ တာ သမားများ အတွက် WinRAR v5.20 beta3(32bit - 64bit)
ဒီနေ့တော့ ကွန်ပျူ တာ သမားတိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်တဲ့ WinRAR v5.20 ဗားရှင်း အသစ်လေးတွေ ကို
မိတ်ဆက် စရာ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ် ကွန်ပျူ တာ သမားတိုင်းလည်း သုံးဘူး ကြမှာပါ။
▼ Winrar 32bit ▼ (OR) ▼ Winrar 64bit ▼
WinRAR 5.20 (32/64bit) Beta 1 Final + Key
WinRAR 5.20 Beta 1 Final လေးထွက်ရှိလာပါပြီ ။ ရှိပြီးသားသူတွေကတော့ Update လုပ်ပေးလိုက်
ပါ။ သူ့ရဲ့လုပ်ပေးနိုင်တာတွေကတော့ RAR , ZIP , CAB, ARJ , LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO,
7Z, Z archives တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း Full ဖြစ်စေဖို့ အတွက် အင်စတောလုပ်ပြီးတာနဲ့ Key ဖိုင်ထဲက Reg
ကို အင်စတောလုပ်ထားတဲ့ C/Program ဖိုင်ထဲက မူရင်းဖိုင်ထဲမှာ ကော်ပီကူးပြီး ပိတ်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
၀င်းဒိုး (x32/x64) နှစ်ခုစလုံး အတွက် ထည့်ပေးထားပါတယ် ။ မိမိဝင်းဒိုးနဲ့ ဆိုင်ရာကိုရွေးပြီး အင်စတောလုပ်ယူပါ။
▼ downloadmm ▼ (OR) ▼ miloshare ▼
From : ဘလော့ခရီးသည် by ရန်ကုန်သား
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, October 13, 2014 No comments:
WinRAR 5.20 (32 / 64bit) Beta 1 Final + Key
WinRAR 5.20 Beta 1 Final လေးထွက်ရှိလာပါပြီ ။ ရှိပြီးသားသူတွေကတော့ Update လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ သူ့ရဲ့လုပ်ပေးနိုင်တာတွေကတော့ RAR , ZIP , CAB, ARJ , LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z archives တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း Full ဖြစ်စေဖို့ အတွက် အင်စတောလုပ်ပြီးတာနဲ့ Key ဖိုင်ထဲက Reg ကို အင်စတောလုပ်ထားတဲ့ C/Program ဖိုင်ထဲက မူရင်းဖိုင်ထဲမှာကော်ပီကူးပြီးပိတ်လုပ်ပေး
လိုက်ပါ။ ၀င်းဒိုး (x32/x64) နှစ်ခုစလုံး အတွက်ထည့်ပေးထားပါတယ် ။ မိမိဝင်းဒိုးနဲ့ဆိုင်ရာကိုရွေးပြီး အင်စ
Install Notes: Read me.txt
▼ usersfiles ▼ (OR) ▼ downloadmm ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, October 11, 2014 No comments:
WinRar Version 5.11 [32 & 64 bits] Full Version For Pc
ဒီကောင်လေးက မနေ့ကမှ ထွက်လာတဲ့ update လေးပါ ကျွန်တော်တို့ software တွေကို ချုံ့ ဖို့နဲ့ သူများ
WinRAR နဲ့ တင်ပေးထားတဲ့ software တွေကို ဖြည်ပြီး အသုံးပြု နိုင်ဖို့ WinRAR ဆိုတာ computer
တိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ကောင်လေးပါပဲ
rar နဲ့ zip ဖိုင်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရာမှန်သမျှကို အကောင်းဆုံး အလွယ်ကူ ဆုံး အလုပ် လုပ်ပေး နိုင်ပါ
တယ် ။ window (32bit_64bit) နှစ်ဖိုင် ခွဲပေးထားပြီး မိမိတို့ အသုံးပြုနေတဲ့ window အလိုက် ဒေါင်းယူ
▼ Download 64 Bits ▼ (OR) ▼ Download 32 Bits ▼
ကဏ္ဍ compressor, WinRaR, WinZip
Rar & Zip ဆိုတာက ကွန်ပြူတာ မှာတင် မဟုတ်ပါဘူး Android ဖုန်းတွေ Tablet တွေ မှာလည်း ရှိထား သင့်တဲ့ Application
တစ်ခုပါ။ မိမိ လိုချင်တဲ့ Application တွေကို Online မှာ ဒေါင်းလုပ် ဆွဲတယ် ဆိုရင် App သီးသန့် တင်ထား တာတွေ လည်းရှိ
သလို Rar & Zip စတာတွေနဲ့ လည်း ချုံ့ပြီး တင်ထား တာတွေ ရှိကြပါတယ်။
အဲဒီ အခါမှာ ဖုန်းထဲ မှာတင် တိုက်ရိုက် Rar ကို ဖြည်ချနိုင် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိမိဖုန်း ထဲမှာ ရှိတဲ့ File တွေ ကိုလည်း Archive လုပ်ပေးနိုင် ပါသေးတယ်။ Archive လုပ်ရာ မှာလည်း Password ပါ ထည့်ထားနိုင် ပါသေးတယ်ဗျာ။
လုပ်ဆောင်ချက် တွေ အားလုံး ကတော့ PC အတိုင်း ပါဘဲ။
Android OS 4.0 နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင် မှာဖြစ် ပါတယ်ဗျာ။
Current Version: 5.10.build23
firedrive Play Store
From: ဘလော့ခရီးသည် by Pyae Phyo (MMiTD)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, July 23, 2014 No comments:
WinRAR version 4.00 32Bit-64Bit
bitshare uploaded turbobit
From: Portable all in one by Portable All
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, June 10, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Portable, WinRaR
RAR for Android Version : 5.10.build14 Apk (All Android)
ဒီကောင်လေး ကတော့ မိမိ ဖုန်းမှာ ဒေါင်းလော့စ် ဆွဲထားတဲ့ RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO,
ARJ archives အစရှိသည်တို့ကို unpack လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အတွဲလိုက်ဒေါင်းရင်လည်းဒေါင်းဖိုင်တွေ
ကိုအမှန်ချစ်ပေးပြီး ဖိုင်ဖြည်လို့ ရပါတယ်။
all - in-one, original, free, simple လေးဖြစ်ပြီး အသုံး ပြု ရလွယ် ကူပါတယ်။
ဒီကောင်လေး ကိုတော့ Android : 4.0 နှင့် အထက်မှာ သာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, April 29, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, WinRaR
ဖုန်းထဲ မှာတင် Zip & Rar ကို ဖြည်နိုင် ခြုံ့နိုင်တဲ့ - 7Zipper v2.0 Apk
Rar & Zip ဆိုတာက ကွန်ပြူတာ မှာတင် မဟုတ်ပါဘူး Android ဖုန်းတွေ Tablet တွေမှာလည်း ရှိ
ထားသင့်တဲ့ Application တစ်ခုပါ။ မိမိလိုချင်တဲ့ Application တွေကို Online မှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတယ် ဆို
ရင် App သီးသန့် တင်ထားတာ တွေလည်း ရှိသလို Rar & Zip စတာတွေနဲ့ လည်း ချုံ့ပြီး တင် ထား
အဲဒီ အခါမှာ ဖုန်းထဲမှာ တင်တိုက်ရိုက် Rar ကို ဖြည်ချနိုင် ပါတယ်။ ဒါ့အအပြင် မိမိဖုန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ File
တွေကိုလည်း Archive လုပ်ပေးနိုင် ပါသေးတယ်။ Archive လုပ်ရာ မှာလည်း Password ပါ ထည့်ထား
လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အားလုံးကတော့ PC အတိုင်း ပါဘဲ။ Android OS 2.1 နှင့် အထက်ဖုန်းများမှာအသုံး
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, April 21, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, WinRaR, WinZip
RAR Password Unlocker 5.0.0.0 Final + Crack
တောင်းဆို ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် တင်ပေး လိုက်ပါပြီ။ WinRAR/ RAR password တွေအ
ကြောင်း ကြောင်းကြောင့် မေ့သွားရင် ပြန်ပြီး အလွယ်တကူ ပြန်ဖြေနိုင်မယ့် RAR Password Unlocker
Final လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။
Full ဖြစ်စေဖို့ အတွက် ဒေါင်းလော့ ဖိုင်ထဲမှာ Crack ဖိုင်လေးကို ထည့်သွင်းပေး ထားပါ တယ်။
အင်စတော လုပ်ပြီး တာနဲ့ မဖွင့်ပါနဲ့။ Crack Folder ထဲက ဟာကို ကော်ပီလုပ်ပြီး အင်စတော လုပ်ထား
တဲ့ C/Prog ထဲမှာ သူ့ရဲ့ ဖိုင်ထဲမှာ သွားပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, April 19, 20142comments:
ကဏ္ဍ Password, Unlocker, WinRaR
WinRAR 5.10 Beta2(x86-x64) Final + Key
WinRAR 5.10 Beta2Final ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ မိမိ ကွန်ပြူတာမှာ RAR and ZIP file တွေဖြေဖို့
အတွက် မရှိမဖြစ် ဆိုတာ ကိုတော့ ကွန်ပြူတာ သုံး သူတိုင်း သိပြီးသားပါ။ ဒီ အခါမှာ မိမိ အသုံးပြု နေတဲ့
WinRAR က Full ဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အခုကျွန်တော် Full ဖြစ်စေဖို့ အတွက် Cracked လုပ်ပြီး သားလေးကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။
မိမိ ၀င်းဒိုး ဆိုင်ရာကို ရွေးပြီး Installလုပ်ပြီးတာနဲ့ Crack ဖိုင်ထဲက Reg လေးကို ကော်ပီကူးပြီး အင်စတော
လုပ်ထားတဲ့ C/Program ထဲက သူ့မူရင်းဖိုင်ထဲမှာ သွားထားပေး လိုက်ပါ။ ဖိုင်ထဲမှာ2ခုလုံးထည့်ပေးထား
၀င်းဒိုး 32 ၊ 64 အားလုံး အတွက် မိမိဝင်းဒိုး ဆိုင်ရာရွေးပြီး အင်စတောလုပ်ပါ။
3] Copy Content from Key Folder to Install Directory
WinRAR 5.10 Beta 1 (x86/x64) Full Version
WinRAR 5.10 Beta 1 (x86/x64) | 3.48 MB
Download WinRAR 5.10 Beta 1 (x86/x64) ( 3.48 MB )
Simple Unrar [for Android]
Android သမားတွေ အတွက် မိမိ ဖုန်းထဲ ကနေ WinRar Zip ဖိုင်တွေကို ဖြည်ဖို့ရန် PC က
WinRar ကဲ့သို့သော အပေါ့ဆုံးနဲ့ ရိုးရှင်း အလွယ်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ Simple Unrar ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ
အလန်းလေး ထွက်ရှိလို့ လာပါပြီ။
ဖြည်နည်းလေးကလွယ်ပါတယ်။ အပေါ်က ပုံတွေထဲက ပထမဆုံးပုံထဲ ကလို ၁-၂-၃ အစဉ်
နံပါတ် တစ်ကတော့ မိမိဖြည်လိုတဲ့ ဖိုင်ကို ထည့်ပါ။
နံပါတ် နှစ်ကတော့ ဖိုင်ဖြည်ပြီးရင် မိမိထားလိုတဲ့ နေရာကို ရွေးပေးပါ။
နံပါတ် သုံးကတော့ ဖိုင်ဖြည်ဘို့ နှိပ်ပါ။
အသုံးပြုရန် အောက်က လင့်တွေမှာ ဒေါင်းယူပါ။
Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.resonancelab.unrar
by Myanmar IT Sky
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, March 14, 2014 No comments: